C/Raxmaan Cirro iyo calaamada madaxweynenimo!!!! | Salaan Media
C/Raxmaan Cirro iyo calaamada madaxweynenimo!!!!
Siyaasi kastaa calaamad iyo tilmaan buu leeyahaya , wuxuuna raacaa qorshe isaga u gaar ah .
Siyaasi kastaa wuxuu leeyahay baalal siyaasadeed oo uu ku duulo , taasina waxay u keentaa sahan guud oo u tilmaamama halkuu dagayo.
Gudoomiye c/raxmaan cirro oo xiligan ah musharaxa xisbiga waddani ee madaxwaynaha 2015 doolarasha Somaliland ka dhacaysa wuxuu sahan ka qaaday wadada uu umarayo madax tooyada.
Hada bal aan eego , dadka siyaasada falanqeeyaa qaabka ay u tilmaameel madaxwaynaha 2015, ee Somaliland sugayso, iyo sababta ay ugu tilmaameen c/raxmaan cirro masharaxa ugu tunka way ee u muuqda in uu madaxwayne noqonayo…
Dadka siyaasada Somaliland u dhuun da loolaa waxay ku tilmaameen , siyaasi aan xidhin albaabada looga soo galo xisbigiisa iyo isagaba, waxay koloo ku cabireen siyaasi aan siyaasadiisu isaga ku soo noqon oo aad uga fiirsada cida uu la samaynayo iskaashi siyaasadeed.
Hadaba bal aan mid mid u eegno sababta loogu xidhay c/raxmaan cirro duubka madaxwaynaha 2015.
Dabeecada shacabka Somaliland waa mid aan uumusin markii wax qaldanmaan , waa dal xoriyatul qawlku xad dhaafay, wax kastana waa la sheegaa, markii siyaasadu cakiranto waa nin aamusa oon xaalada dab ku sii qaban, eegana bal xaaladu halkay ku danbaynayso..
Tusaale waxaa loo soo qaadan karaa, 17 urur siyaasadeed ee Somaliland , wuxuu isagu hogaaminayay waddani , ololihiisii siyaasadeed wuxuu ku mutaystay in ururo siyaasadeed oo badani ku soo biiraan waddani , DR mahamed cabdi gaboose oo dadku ku tilmaamaan sahamiye siyaasadeed oon kagaban meesha uu doonayo, xiligan waa gacanta midig ee cirro, marka la eego urur siyaasadeed kii bad baado oo isna baaxad siyaasadeed ku lahaa Somaliland xiligan waa waddani ., ilaa 12 urur siyaasadeed iyo hogaamiye yaashoodii baa ku biiray.
Xalintii khilaafkii madaxwaynaha iyo ku xigeenkiisa sookala dhexgalay iyo sidii uu uxalilay, ayaa u keentay guul siyaasadeed c/raxmaan cirro.
Xisbigii ucid iyo gudoomiye faysal oo 2sano weerar hawada ah kuwaday xisbiga waddani iyo cirro, xiligan wuxuu isu badalay saaxiibo kala baaday duufaanada siyaasaduna kalaqariyeen oo xiligan si wax uwada arka.
Dadka saadaalinaya in c/raxmaan cirro madaxwayne noqonayo 2015 waxay cabirkooda ku jaan gooyeen , in uu yahay nin siyaasada fahansan, oo dabdamis u noqon kara xaaladaha soo waajihi kara xiliyada ad adag.
Xidhiidhka guud ee uu la leeyahay madaxdhaqameedka Somaliland intooda badan iyo goobaha dhalinyaradu isugu timaado oo markasta lagu arko ayay ku tilmaameen in uu kaga duwanyahay musharixiinta xisbiyada kale……………….